खोजी इन्जिन अनुकूलन प्याकेजहरूबाट कसरी चयन गर्ने?
आजकल, त्यहाँ धेरै खोज इन्जिन अनुकूलन सेवा प्रदायकहरू सारा संसारमा देखा पर्दछ. उनमें से कुछ किफायती मूल्यों द्वारा वेबसाइट के मालिक को आकर्षित करते हैं, जबकि अन्य महंगा लेकिन गुणवत्ता अनुकूलन संकुल प्रदान करते हैं. त्यसोभए, स्याउ हजारौं भेरिएन्ट्स बीच राम्रो एसईओ कम्पनी भेट्न यो एक कठिन काम हो, खास गरी यदि तपाईंले पहिले कहिल्यै अनुकूलन सेवाहरू प्रयोग गर्नुभएन. किनकी एसईओ संकुलहरू एक-अर्काबाट फरक फरक हुन सक्छन्, तपाइँ अनुकूलन सेवाहरूमा विभिन्न एजेन्सी प्रदान गर्न ड्रिल गर्न समय लिन आवश्यक छ.
खोजी इञ्जिन अप्टिमाइजेस अनलाइन व्यापार विकासको एक महत्वपूर्ण भाग भएको छ. चाहे तपाईं एक स्थानीय कम्पनी वेबसाइट वा ठूलो उद्यम वेब स्रोत निर्माण गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईलाई एसईओ सेवा चाहिन्छ किनकि यसले तपाइँको अनलाइन व्यवसायलाई SERP मा दृश्यात्मक बनाउन सक्षम पार्दछ र तपाइँको संभावित ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्दछ।. एक विजेता खोजी इन्जिन अनुकूलन अभियानसँग तपाइँको लगानीमा फर्किने प्रत्यक्ष प्रभाव छ. तथापि, एक सफल एसईओ रणनीति निर्माण गर्न, तपाईलाई सही एसईओ प्याकेज छनौट गर्न आवश्यक छ. यो प्याकेजले तपाईको साइटमा लक्षित ट्राफिकलाई आकर्षित गर्न सहयोग नगर्ने तर तपाईको व्यवसायको विशिष्ट आवश्यकताहरू पनि पूरा गर्न सक्दछ. सत्यलाई भनिएको छ, यो उपयुक्त एसईओ प्याकेज चयन गर्न एक सजिलो कार्य होइन. तथापि, त्यहाँ तपाईंको अनलाइन व्यापारको लागि उत्तम खोजी इन्जिन अनुकूलन प्याकेजसँग अन्त गर्न सुनिश्चित गर्न धेरै चीजहरू छन्.
विभिन्न प्रकारका एसईओ प्याकेज
एसईओ एजेन्सीहरू द्वारा प्रदान गरिएका प्याकेजहरू दुई आधारभूत प्रकारहरू - मानक र अनुकूलित हुनसक्दछ।.
मानक एसईओ प्याकेज सामान्यतया आधारभूत मानक एसईओ सेवाहरू र प्रविधिहरू समावेश गर्दछ जस्तै कि खोजशब्द अनुसन्धान, सामग्री लेखन, वेबसाइट भित्री संरचना अनुकूलन र लिङ्क निर्माण. यसको मतलब यो पैकेजले वेबसाइट अप्टिमाइजेसन प्रविधिहरूको लागि मात्र आवश्यक पर्दछ जुन तपाईंको अनलाइन व्यवसायको उपस्थितिलाई सुधार गर्न सक्छ. मानक एसईओ प्याकेज सामान्यतया एक किफायती मूल्य छ किनकी यसले कुनै अतिरिक्त अप्टिमाइजेसन स्रोतहरू आवश्यक पर्दैन र एक एसईओ विशेषज्ञ द्वारा गर्न सकिन्छ।. मानक एसईओ प्याकेजहरू भर्खरै सुरु गरिएका वेबसाइटहरूमा अपील गर्दै छन्. पहिलो मामला जो कि वेबसाइट स्वामी एक मानक एसईओ प्याकेज को आदेश को सामना गर्छन सबै प्रस्तावित प्रविधिहरु लाई उनको प्रचार अभियान को आवश्यकता छैन. साथै, आवश्यक सेवाहरूसँग यी सेवाहरू प्रतिस्थापन गर्न कुनै मौका छैन वा सबैका लागि तिर्न नदिनुहोस्. किनकि तपाईंको वेबसाइटको सेवाको लागि बेकारको लागि यो अर्थ छैन, धेरै अनलाइन व्यापारीहरू एसईओ प्याकेज अनुकूलित हुन्छन्.
अनुकूलित एसईओ प्याकेज मार्फत सेवा मालिकहरु लाई सेवा प्रदान गर्दछ जुन विशेष रूप देखि आफ्नो व्यवसाय को लागी डिजाइन गरिएको छ।. तपाइँलाई तिर्नको लागि आवश्यक बेकार सेवाहरू छैनन्. तथ्यको बावजूद कि सेवाको लागी अनुकूलित सेवाहरूको लागत अपेक्षाकृत उच्च छ, यो अझै पनि यो लगानीमा एक स्मार्ट निर्णय हो. यस प्रकारको एसईओ प्याकेज तपाईंको व्यवसायको अनियमित आवश्यकताहरूको अनुरूप भएको छ, तपाईंको लगानीले स्पेसमा भुक्तान गरिने छ. अनुकूलन खोजी इन्जिन अनुकूलन सेवाहरूमा सामान्यतया बजार आला विश्लेषण, प्रतियोगी अनुसन्धान र अन्य फायदेमंद अप्टिमाइजेसन रणनीतिहरू जुन तपाईंको अनलाइन व्यवसायको उपस्थितिमा सुधार गर्न र वेबसाइट रूपान्तरण बढ्न सक्छ।. अनुकूलन खोजी इन्जिन अनुकूलन सेवाहरूलाई एक विशेषज्ञ टोली कार्य आवश्यक छ किनकि तिनीहरूको लागत औसत भन्दा बढी हुन सक्छ.
त्यसैले, जब एसईओ प्याकेजलाई तपाइँले प्रयोग गर्न आवश्यक छ भन्ने निर्णय गर्नुहुन्छ, तपाईलाई निश्चित गर्न आवश्यक छ कि तपाइँ सबै अनुकूलन प्रविधिहरू प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ तपाईको अनलाइन व्यवसायलाई एक्सेल चाहिन्छ।. निश्चित गर्नुहोस् कि एसईओ प्याकेज तपाईंले आफ्नो बजार आला विश्लेषण, खोजशब्द अनुसन्धान, गुणस्तरको उत्पादन पीढी, डाइरेक्टरी सबमिशन, वेबसाइट भित्ता अनुकूलन अनुकूलन, इन्टरलिंकिंग, मेटाडेटा अनुकूलन, लिङ्क निर्माण अभियान र ब्लग पोस्टिंग समावेश गर्दछ।.
एसईओ प्याकेजमा खोज्न के तपाईंलाई आवश्यक छ?
तपाईको व्यवसायको लागि उपयुक्त अनुकूलित अनुकूलन खरीद गर्नु एसईओ प्याकेज प्रायः वेबसाइट अनुकूलन को लागी लागत प्रभावी र समय-प्रभावी तरीका हो।. हामी अधिक विस्तृत बोल्न तपाईंलाई एक राम्रो एसईओ परिणाम प्राप्त गर्न खोज इन्जिन अनुकूलन प्याकेज मा हेर्न को आवश्यकता छ के गरौं.
तपाईंको अप्टिमाइजेसन अभियान को प्रारम्भिक चरण तपाईंको वेबसाइट को पेशेवर लेखा परीक्षा, तपाईंको सामग्री प्रबंधन प्रणाली र वर्तमान को लागि समर्पित हुनु पर्छ। साइट आर्किटेक्चर. एक तकनीकी लेखा परीक्षा एसईओ विशेषज्ञहरु लाई HTML कोड मा त्रुटिहरु को खोज र समाप्त गर्न को लागि मदद मिलेगी. यसबाहेक, एक व्यापक समीक्षामा दुवै-र बन्द-साइट तत्त्व विश्लेषणहरू समावेश छन् भनेर सुनिश्चित गर्नका लागि कि तपाईंको गुगल साइटबाट तपाइँको साइट छुट्याउने कुनै गलत त्रुटिहरू छैनन्।.
कीवर्ड सुझाव एसईओ प्याकेज को मुख्य घटक हो किनकि यो कुनै पनि वेबसाइट अनुकूलन अभियान को प्रारंभिक चरण को रूप मा कार्य गर्दछ. नियमको रूपमा, खोजी इञ्जिन अप्टिमाइजेसन विशेषज्ञहरूले आफ्ना ग्राहकहरूलाई उच्च-भोल्युम खोज सर्तहरूको सेटसँग प्रदान गर्छन् जुन एसईओ एजेन्सीले लक्षित गर्नेछ. एक पेशेवर एसईओ विशेषज्ञले चयन गरिएका कुञ्जीपाटीहरूको प्रासंगिकता जाँच गर्न उपकरणहरूको संख्या प्रयोग गर्न र तपाईको साइटमा गुणस्तर ट्राफिक लक्षित गर्नको लागि सबैभन्दा राम्रो वाक्यांशहरूको सूची प्राप्त गर्नुपर्छ।.
गुणवत्ता लिङ्क निर्माण अभियान कुनै पनि अफ-पृष्ठ अनुकूलन को आवश्यक भाग हो।. प्रासंगिक र गुणस्तर लिङ्कहरूको संख्या जुन तपाईंको साइटमा इंगित गरिएको छ तपाईंको खोजी प्राधिकरण र खोजी इन्जिनको आँखामा प्रतिष्ठा निर्धारण गर्दछ. एक राम्रो एसईओ कम्पनीले विभिन्न ग्राहकहरु र अनलाइन आउटलेट संग सहयोग गर्न को लागी ग्राहकहरु को गुणवत्ता र प्रासंगिक backlinks को संख्या संग प्रदान गर्न को लागि. पूर्ण-स्ट्याक डिजिटल कम्पनीले लिंक एसईओ प्याकेजको एक भागको रूपमा लिङ्क इमारत सेवाहरू प्रदान गर्दछ र तपाईंलाई निम्न लिङ्क उत्पन्न प्रविधि प्रदान गर्दछ: बजार आला अनुसन्धान, प्रतियोगी लिङ्क प्रोफाईल विश्लेषण, प्रासंगिक र प्राधिकृत डाइरेक्टरीमा तपाईंको वेब स्रोत पेश गर्दै, अतिथि ब्लग लेख्न। पोष्टहरू र गुणस्तर र अनौठो लेखहरू सिर्जना गर्नुहोस्.
सामग्री विपणन सेवाहरू दुवै मानक र अनुकूलन एसईओ संकुलहरूमा पनि समावेश गर्न सकिन्छ यदि SEO सल्लाहकार मानिन्छ कि वेबसाइटको सामग्री सुधार गर्न आवश्यक छ। वा पुन: लेख्नु पर्छ. एक अनुकूलित सामग्री उत्पन्न गर्न एक समय-उपभोग र पेन्डिङसिङ प्रक्रिया हो किनकि किन अनुकूलन को यो पक्ष महंगा हुन सक्छ Source .